सानिमा बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १ कात्तिक २०७८)
अंक समाचार लगानी
बैंकले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले १७ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ८९४७ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनका लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
उक्त प्रस्ताव पारितका लागि कम्पनीले आगामी कात्तिक १४ गते साधारण सभा बोलाएको छ । सभा आम्रपाली ब्यांक्वेट बालुवाटार काठमाडौंमा बिहान ११ बजे गर्ने जानकारी गराएको हो ।
त्यस्तै, उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, संस्थापक समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सञ्चालकको निर्वाचनलगायत प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साधारणसभा प्रयोजनका लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका कात्तिक ७ गते एक दिन बन्द रहनेछ ।
यस आधारमा कात्तिक ४ गतेसम्म कायम शेयरधनीले साधारणसभामा सहभागी हुन र लाभांश पाउनेछन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. ९ अर्ब ६८ करोड १५ लाख रहेको छ । प्रस्तावित १७ प्रतिशत बोनस शेयर वितरणपछि पुँजी रु. ११ अर्ब ३२ करोड ७३ लाख पुग्नेछ ।
कम्पनीको ५६ दिने कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो ओपनिङ मारुबोजू बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा आगामी दिनमा कम्पनीको शेयर मूल्य हालकै प्रवृत्तिमा निरन्तर रहन सक्ने संकेत गर्छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ५१ दशमलव ९५ बिन्दुमा छ । यसले शेयर खरिद बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन ४ दशमलव शून्य ६ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्यरेखा यी दुवै मूल्यरेखाभन्दा माथि छ ।
आइतबारको शेयर मूल्य रु. ५१० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ४९८ मा टेवा पाउने र महँगिए रु. ५२८ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।
भारतमा थपिए ९ हजार २१६ जना कोरोना संक्रमित